သင့်လည်ပင်းကို လှပနုပျိုစေမယ့် နည်းလမ်း (၆) ခု | တရားဝင် site Goji Cream
သင့်လည်ပင်းကို လှပနုပျိုစေမယ့် နည်းလမ်း (၆) ခု
25 မတ်လ 2022
လည်ပင်းရှိ အသားအရေကို အတတ်နိုင်ဆုံး လှပပြီး တင်းရင်းနေစေလိုပါက လည်ပင်းအတွက် အထူးသွေးပူပေးရုံသာမက အသားအရေ တင်းရင်းမှုနှင့် အရေးအကြောင်းများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် သဘာဝနှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။သင့်လည်ပင်းကို လှပစေပြီး ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုကို ပြန်လည်ရရှိစေမယ့် ရိုးရှင်းတဲ့ နည်းလမ်း6ခုကို ပေးစွမ်းထားပါတယ်။
အချိန်က လည်ပင်းမှာ အမှတ်အသားတွေ အမြဲကျန်နေတာကြောင့် ဆွဲဆောင်မှု နည်းပါးပါတယ်။
အရေပြားလျော့တွဲခြင်း၊ အရေးအကြောင်းများနှင့် မေးစေ့နှစ်ထပ်ကိုပင် ဆွဲဆောင်မှုဟုခေါ်ဆို၍မရပေ။လည်ပင်း အရေပြားကို တတ်နိုင်သမျှ ကြာကြာ တင်းတင်းရင်းရင်း ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြမှာ မဟုတ်ဘူးလား။
ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ၊ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ တကယ့် အလှအပဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်အမှုတွေကို ခွဲစိတ်ခန်းရဲ့ နံရံအပြင်ဘက်မှာသာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အိမ်မှာဘဲ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။သို့သော်လည်း သင့်အရေပြားပေါ်ရှိ ပျက်စီးနေသောအချိန်များကို နှေးကွေးစေပြီး သင့်အသားအရေကို တတ်နိုင်သမျှကြာရှည်အောင် တင်းတင်းမာမာနေစေရန် အိမ်တွင် သင်ပြုလုပ်နိုင်သော ရိုးရှင်းသောကုသမှုအနည်းငယ်ရှိပါသည်။
အရာအားလုံးက ပထမတစ်ချက်မှာ ထင်ထားတာထက် အများကြီးရိုးရှင်းပါတယ်။အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုရရှိရန် သင်လိုအပ်သမျှမှာ စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့် ဇွဲလုံ့လတို့ဖြစ်ပြီး အဆိုပါအကြံပြုချက်များကို ပုံမှန်အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် သင့်အား ကူညီပေးမည်ဖြစ်သည်။ဤရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများသည် သင့်လည်ပင်းရှိ အရေပြားကို တင်းကြပ်စေရုံသာမက သင့်ကျန်းမာရေးနှင့် အလုံးစုံကျန်းမာမှုကိုပါ တိုးတက်စေမည်ဖြစ်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ပြီးရင် သင့်လည်ပင်းကို လှပစေပြီး နုပျိုစေမယ့် လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်း (၆) ခုကို သိမ်းထားပါ။
ဗိုက်ချပ်ပြီး သွယ်လျပြီး တင်ပါးဆုံရိုးအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ မကြာခဏ လုပ်ဖြစ်မှာလား။ထို့ကြောင့် လည်ပင်းရှိ အရေပြား၏ elasticity ကို ပြန်လည်ရရှိစေပြီး ၎င်း၏ကြွက်သားများကို ပိုမိုပျော့ပျောင်းစေပြီး တင်းမာလာစေမည့် နှိပ်နယ်မှုဖြင့် သင့်အစည်းအဝေးများကို အဘယ်ကြောင့် ဖြည့်စွက်ပါသနည်း။
ယနေ့ ဤရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် စတင်လိုက်ပါ။
ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း မှန်ရှေ့မှာရပ်ပြီး သင့်လည်ပင်းကို အစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ်လိမ်းပေးပါ။
ပေါ့ပါးသော အနှိပ်လှုပ်ရှားမှုများဖြင့် ညှပ်ရိုးမှ လည်ပင်းအထိ ညင်သာစွာဆွဲစပြုပါ။
အောက်ခြေကနေ အပေါ်ကို နှိပ်နယ်ပေးဖို့က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒါက သွေးလည်ပတ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်လို့ပါပဲ။
လည်ပင်းရှိ အရေပြားကို ပြန်လည်နုပျိုစေရန်အတွက် အဆီများ
အသားအရေကို ယခင်အတိုင်း တင်းတင်းမာမာ တင်းရင်းစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Essential Oil က သင့်ဆီရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ လည်ပင်းရှိ အရေပြားသည် ပျော့ပျောင်းလာပြီး လျော့ပါးသွားသည်ကို လူအများစုက သတိပြုမိကြသည်။အရေပြား အခြေအနေကို စစ်ဆေးရန်၊ ၎င်းကို ဒလိမ့်တုံးဖြင့် ကွေးပြီး မည်မျှ လျင်မြန်စွာ ဖြောင့်တန်းကာ မူလအနေအထားသို့ ပြန်သွားသည်ကို ကြည့်ရှုရန် လိုအပ်ပါသည်။
ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ collagen နှင့် elastin ပမာဏသည် အရေပြားအခြေအနေအတွက် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။
လည်ပင်းအသားအရေကို ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေမယ့် အကြံပြုချက်အချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးနှင့် အသွင်အပြင် တိုးတက်စေရန်အတွက် သင့်လျော်သော အာဟာရနှင့် လေ့ကျင့်ခန်း၏ အခြေခံမူများကို လိုက်နာရုံသာမက အရေပြားပေါ်ရှိ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အဆီအချို့ကိုလည်း လိမ်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဗီတာမင် C ပါဝင်မှုများသောကြောင့် သံပယိုသီးတွင် အစွမ်းထက်သော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း ဖြစ်သောကြောင့် သံပရာသီးကို သေချာဝယ်ယူပါ။
Sage oil သည် လည်ပင်းရှိ အရေပြားကို ပိုမို ပျော့ပျောင်းစေပြီး တင်းမာစေပါသည်။
သဘာဝအလှကုန်တွေပါတဲ့ စတိုးဆိုင်တွေမှာ မကြာခဏဆိုသလို မုန်လာဥနီစေ့တွေရဲ့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဆီတွေကိုလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။အရေပြားဆဲလ်များ ပြန်လည်နုပျိုမှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး အရေးအကြောင်းများကို သိသာစေပါသည်။
လည်ပင်းတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ ၁-၂ စက်ကို လိမ်းပြီး ယခင်အစွန်အဖျားတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ပေါ့ပါးသော အနှိပ်လှုပ်ရှားမှုများဖြင့် ပွတ်တိုက်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ငှက်ပျောသီးမှည့်နှင့် သံလွင်ဆီ မျက်နှာဖုံး
ဤ mask သည် လည်ပင်းရှိ အရေပြားအား ၎င်း၏ ယခင် ပျော့ပျောင်းမှု၊ လှပမှုနှင့် နုပျိုမှုကို အိမ်တွင် ပြန်လည်ရရှိစေမည့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ်သာ လိမ်းပေးရပါမယ်။
ငှက်ပျောသီးမှည့် ၁ လုံး
ကြက်ဥအဖြူ ၁ လုံး
ပျားရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း (၇. ၅ ဂရမ်ခန့်)
အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်- ချောမွေ့သောတစ်သားတည်းကျသောအရောအနှောကိုရရှိရန် ရရှိနိုင်သောထုတ်ကုန်သုံးမျိုးကိုသာ ရောနှောရန် လိုအပ်ပါသည်။
ပုံမှန်အတိုင်း လည်ပင်းကို ဆေးကြောပြီး Mask လိမ်းပြီး 15 မိနစ် ထားလိုက်ပါ။
ကျန်တဲ့ mask တွေကို ရေများများနဲ့ သေချာဆေးပါ။
ရလဒ်များသည် သင့်ကို အံ့အားသင့်စေမည်ဖြစ်သည်။
ဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားခြင်းမရှိဘဲ လည်ပင်းရှိ အရေပြားသည် ဆွဲဆောင်မှု ရှိမည်မဟုတ်ပေ။
လှပတဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆဲလ်သေတွေကို ခဏခဏ ဖယ်ရှားပေးရပါမယ်။
ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် အရေပြားကို သန့်စင်စေပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကို ကောင်းမွန်စေရုံသာမက အရေပြားဆိုင်ရာ မစုံလင်မှုများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အရေပြားအတွင်း အောက်ဆီဂျင်ဝင်ရောက်မှုကိုလည်း တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသောကြောင့် မယုံနိုင်လောက်အောင် ကောင်းမွန်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသည်။
အိမ်မှာ အလွယ်တကူ ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ Scrub ချက်နည်းကို ပေးထားပါတယ် ။
သံပုရာရည် ၁ လုံး
oatmeal5ဇွန်း (50 ဂရမ်)
ခရမ်းချဉ်သီး ၁ လုံး
ခရမ်းချဉ်သီးကို ပါးပါးလှီးပြီး သန့်စင်သောပုံစံအတိုင်း သမအောင် စတင်ပါ။
ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးထဲတွင် ခရမ်းချဉ်သီးသန့်သန့်၊ သံပုရာရည်နှင့် oatmeal ကို ရောမွှေပါ။
တစ်သားတည်းသောအရောအနှောကိုဖွဲ့စည်းသည်အထိထုတ်ကုန်များကိုသေချာစွာရောမွှေပါ။ပြီးရင် Scrub ကို လည်ပင်းမှာ လိမ်းပြီး ၁၅ မိနစ်လောက် ထားလိုက်ပါ။
ကျန်တဲ့ Mask တွေကို အရေပြားပေါ်ကနေ ရေဆေးချပါ။
ဗီတာမင် E - အရေပြားအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။
ဗီတာမင် E သည် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ထူးထူးခြားခြား သဘာဝ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းမှု ထုတ်ကုန်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ဒီဓာတ်က အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို တိုက်ဖျက်ပေးပြီး အရေပြားကို free radicals တွေရဲ့ အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ အာနိသင်တွေကနေ ကာကွယ်ပေးပြီး သူ့ရဲ့အရင်က တင်းမာမှုနဲ့ elasticity ကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။
ထို့ကြောင့် ဆေးဆိုင်များတွင် ဗီတာမင် E တက်ဘလက်များကို ဝယ်ရန် သို့မဟုတ် ဤအသုံးဝင်သော အစိတ်အပိုင်းပါရှိသော စတိုးဆိုင်စင်များရှိ ခရင်မ်များကို ရှာဖွေရန် သင့်အား အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ရေခဲကုထုံးကို သင်ကြားဖူးပါသလား။အသားအရေထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင် သဘာဝအလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို ပိုအာရုံစိုက်ဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ရေခဲတုံးများသည် လည်ပင်းကို ကုသရန် အကောင်းဆုံး ထုတ်ကုန်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ရေခဲတုံး ၃ တုံးကိုယူ၍ အဝတ်စဖြင့်ထုပ်ပြီး လည်ပင်းအရေပြားပေါ်တွင် ၁၀ မိနစ်ခန့် ညင်သာစွာ ပွတ်ပေးပါ။ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို တစ်ပတ်လျှင် သုံးကြိမ် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။
ပထမဦးစွာ ဤနည်းလမ်းသည် သွေးလည်ပတ်မှုကို ကောင်းမွန်စေသည်။
ဒုတိယအနေနဲ့ ရေခဲက ရောင်ရမ်းမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
ရေခဲက အသားအရေကို ပိုညီစေပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အသွင်အပြင်ကို ပေးပါလိမ့်မယ်။
အသားအရေရဲ့ elasticity နဲ့ အလှကို ဂရုစိုက်တာက သင့်လက်ထဲမှာပဲရှိတာကြောင့် ဒီအချက်တွေအားလုံးကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်ပါ။
ဘဝသည် တစ်သားတည်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန် ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်သင့်သည်။
အိမ်တွင် မျက်နှာအသားအရေကို ပြန်လည်နုပျိုစေသောနည်းလမ်းများ- သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို တိုက်ဖျက်သည့် ရိုးရာနည်းလမ်းများ။
12 မတ်လ 2022
ရိုးရာကုထုံးများဖြင့် အသားအရေကို ပြန်လည်နုပျိုအောင် မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။အရေးအကြောင်းများအတွက် ရိုးရာကုထုံးများ (မျက်နှာဖုံးများနှင့် လိမ်းဆေးများ) တွင် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ၊ ပျားရည်၊ ဆီများ၊ oatmeal နှင့် အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ ဖျော်ရည်များနှင့် ဖျော်ရည်များ ပါဝင်သည်။
11 ဖေဖော်ဝါရီလ 2022
လေဆာပြန်လည်နုပျိုခြင်း- ablative သို့မဟုတ် non-ablative?
လေဆာပြန်လည်နုပျိုခြင်း၏ ablatative နှင့် non-ablative နည်းလမ်းများရှိသည် - တစ်ခုစီသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အရေပြားပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ဘယ်နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ရမလဲ၊ ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ။
8 ဖေဖော်ဝါရီလ 2022
မှာယူရန် Goji Cream 50% အထူးလျှော့စျေး